जानी राख्नुहोस: रातमा ६ घण्टा भन्दा कम सुते के हुन्छ ? – hamrosandesh.com
जानी राख्नुहोस: रातमा ६ घण्टा भन्दा कम सुते के हुन्छ ?
मानिसहरु रातमा सुत्नुको सट्टा मोबाइल र इन्टरनेटमा व्यस्त हुने र बिहान चाँडै उठेर कामधन्धामा लाग्ने हुँदा उनीहरुको निन्द्रा पूरा हुन पाउँदैन । यसरी हेर्दा त्यस्ता मानिसहरु औसत दैनिक चार देखि पाँच घण्टा मात्र निदाउने गर्छन् । यदि तपाई पनि यही जिवनशैलीमा अभ्यस्त हुँदैहुनुहुन्छ भने सावधान हुनुहोस् किनभने यसले तपाईको स्वास्थलाई खराब मात्र बनाउने होइन गम्भिर रोग पनि उत्पन्न गराउने खतरा हुन्छ ।
हालै एउटा शोधमा रातभरी नसुतेर बिहान चाँडै उठ्ने मानिसहरुलाई धेरैवटा गम्भिर बिरामीको खतरा रहने खुलासा भएको छ ।
त्यस्ता मानिसहरुलाई ऐथिरोस्क्लेरोसिस नामको गम्भिर बिरामीको खतरा बढ्छ । यस्तो बिरामी भएका मानिसहरुको नाडीमा प्लाक जम्छ र त्यसले उनीहरुको शरीरलाई कडा र संकरी बनाउँछ र त्यसको परिणामस्वरुप रक्त संचार कम हुन्छ । यो मुटु रोगको सबैभन्दा ठूलो कारण हो ।
चिकित्सकको अनुसार मुटुरोगबाट बच्नका निम्ति सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो न्यूनतम छ घण्टाको निन्द्रा पूरा गर्नुपर्छ । यस बाहेक निन्द्रा पूरा नहुँदा त्यसको असर हाम्रो स्वभाव र जीवनशैलीमा पनि पर्छ । निन्द्रा पुरा शरीरमा आलस्यता पैदा हुने , कुनै काम गर्न मन नलाग्ने हुन्छ ।
जानकारहरुको अनुसार रातमा निन्द्रा पुरा नभए पनि दिनमा सुतेर आफ्नो निन्द्रा पुरा गर्न सकिन्छ तर पनि आवस्यकता भन्दा बढी सुते टाउको दुख्ने समस्या देखा पर्न सक्छ।
आजभोलि अधिकांश युवाहरु स्लिपिङ डिसअर्डरबाट ग्रसित छन् । यसको परिणामस्वरुप उनीहरुमा आक्रोश र हिंसाको भाव बढेको पाइन्छ साथै सोच्ने क्षमतामा पनि गिरावट आएको छ ।